मनोरञ्जन – Page6– Tesro Ankha
‘रमझम पूरा गर्न सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको होइन’
डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सफल उद्यमीको रहरलाग्दो जीवनशैलीले गायक तथा संगीतकार दिपेश राईलाई लोभ्याउन सकेन । छोटो समयमा १९ गीतमा संगीत भरेका उनको ११ गीत रेकर्ड भइसकेको छ । नाम, दाम र सम्मान पाइने भएकाले गीत/संगीतमा भविष्य खोज्न लागिपरेका गायक तथा संगीतकार दिपेश राईसँग तेस्रो आँखा डटकमले गरेको कुराकानी : युवापुस्ताले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सफल उद्यमी वा विदेश गएर उच्चशिक्षा हासिल गने सपना देख...
एक व्यक्तिले बाँचुन्जेल के–के गर्न भ्याउलान् ? उत्तर सहज छैन । यही प्रश्न गीता पालुङ्वालाई सोधियो भने उनी भन्छन्, ‘मैले आजसम्म गीतकार, पत्रकार, नृत्य, समाजसेवा र मोडलिङ गर्नसमेत भ्याएँ ।’ आफैँले लेखेको केही गीतमा उनले मोडलिङ गरेकी हुन् । दोखु, ताप्लेजुङनिवासी उनी हिजोआज हङकङमा छिन् । उनी वैदेशिक रोजगारीक्रममा २० वर्षअघि हङकङ पुगेकी हुन् । यति धेरै विधामा बाँडिएर बाँच्दा उनलाई कस्तो अनुभूति हो...
‘तिमी तारेभीर म त लहरा, तिमीमैमा लहराउँछु तिमी सहारा’ शीर्षाकृत गीतका गायिका पवित्र सुब्बा हिजोआज कता हराइन् ? गायिका सुब्बाका श्रोताले यस्तै प्रश्न सोध्ने गर्छन् । बिहेपछि ब्रुनाई पुगेकी उनी उतै रहेको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले उनी कता हराइन् भनेर श्रोताले सोधिखोजी गर्ने नै भए । आफूलाई ‘लो प्रोफाइल’ का ठान्ने उनी पल्टनघरमै सीमित रहेकी छन् । केही सयमअघि नेपाल आएकी पवित्रले सुनाइन्, ‘टोटल ...
‘दुई कक्षामा पढ्थेँ । शिक्षकले गीत गाउन लगाउनुभयो । सहर्ष स्विकार्दै मैले गीत गाएँ,’ मैतीदेवीमा भेटिएकी खुसेनिछो चाम्लिङले भनिन्, ‘गीत गाउँदा शिक्षकले दुई रुपियाँ दिनुभएको थियो । एक रुपियाँको डटपेनको रिफिल किनेँ । बाँकी रुपियाँले कापी हो कि बलगम किनेर खाएँ, बिर्सें ।’ दुई रुपियाँ पाएपछि गायिका खुसीनिछो उत्साहित भइन् । उनले पढाइ र गायन सँगसँगै अगाडि बढाइन् । चार कक्षा पुगेपछि उनले गीत गाउन छाडिन् ...